NgoLwesithathu, Februwari 24, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 24, 2021 Douglas Karr
Ingxenye ebaluleke kakhulu isu elisha ukusebenzisa ngokunenzuzo lezo zinkinga ezi-3 ezingenhla. Sidinga ukuqinisekisa ukuthi sifaka ukuqondiswa kabusha kuwo wonke amakhasi alahlekile (amaphutha angama-404) FUTHI singasebenzisa abasebenzisi babo bokusesha ngezilimi eziningi ngokungeza amakhasi ahunyushiwe. Kulesi sihloko, ngizogxila kwi Inkinga yephutha engu-404 - ngoba kulimaza amazinga ezinjini zabo zokucinga.
Hhawu. Lokho kubi kulwazi lomsebenzisi futhi akulungile kokuhlangenwe nakho kwabasebenzisi benjini yokusesha. Ngenxa yalokho, injini yokusesha ayinaki i-backlink… ekugcineni eyehlisa igunya nesikhundla sakho.
Uma une-ejensi egxile kuthrafikhi yakho yokusesha ye-organic (futhi NONKE i-ejensi yokuqamba iwebhusayithi kufanele ibe njalo) noma uma une-consultant ye-SEO ENGENZANGA lo msebenzi, ngikholwa ukuthi badembesela ngempela emsebenzini wabo wobuciko. Izinjini zokusesha ziyaqhubeka nokuba ngumthombo ophezulu wethrafikhi yamathemba afanele ngenhloso yokuwathenga.
Isinyathelo esilandelayo ukucubungula okuqukethwe kwabo uqobo bese sibona ukuthi singakwenza kanjani lula futhi sakhe i umtapo wokuqukethwe kuhleleke kahle futhi kuhlelwe kusayithi elisha. Isikhathi esiningi, ngakha amakhasi angenalutho esimweni esenziwe nge-WordPress ukuze ngibe nohlu lokuhlola engizoqedela kamuva abalobi bami nabaklami abazosebenzela kulo.
Uma singakwazi ukwenza lula ukwakheka kwe-URL futhi sizame ukugcina ikhasi bese sithumela ama-slugs amafushane futhi alula, siyakwenza. Ngiqaphele eminyakeni edlule ukuthi ngenkathi iqondisa kabusha okuthiwa ilahlekelwa yigunya elithile… nokwenza kahle kwazo kushayela ukuzibandakanya okwandisiwe, okuhumushela ezingeni elingcono. Angisesabi uqondise kabusha ikhasi elisezingeni eliphezulu uye ku-URL entsha lapho kunengqondo. Yenza lokhu kuspredishithi!
Uma uzenzile zonke lezi zinyathelo kuze kube manje, unendawo entsha, konke ukuqondisa kabusha ngaphakathi, konke okuqukethwe okukuyo, futhi usukulungele ukwethula. Umsebenzi wakho awukapheli… kufanele ubheke isiza esisha ukukhomba noma yimaphi amakhasi angama-404 usebenzisa amathuluzi amabili ahlukene:
Njengesibonelo, sethule isiza sendawo enezindawo eziningi Udokotela wamazinyo ogxile ezinganeni ezinokutholakala kweMedicaid. Elinye lamakhasi esiwalibonile elinama-backlinks angazange ambozwe kwakuyi-athikili, Amazinyo Ezingane 101. Isayithi ekhona ibingenayo i-athikili. Umshini weWayback wawunengcaphuno kuphela. Ngakho-ke lapho sethula isiza esisha, senze isiqiniseko sokuthi sine-athikili ephelele, i-infographic, nezithombe zenhlalo ezinokuqondisa kabusha kusuka ku-URL yakudala kuye entsha.